Odayaal Soomaaliyeed oo geed ku sheekaysanaya ayaa waxaa ku soo orday wiil uu dhalay oday meesha fadhiyey. Oday caaqil ah oo meesha fadhiyey baa yiri war ninkii wiilkaas dhaloow qabso oo ka hor tag. Odaygii wiilka dhalay waa is-adkeeyey. Wiilkii inta raggii soo dul istaagay buu yiri aabbe hooyo waxay ku leedahay kaalay ciirta noo bixi! Odaygii taladiisa la diiday inta is-haaraamay buu yiri uf maxaan lahaa. Runtii ciir bixintu ceeb maahee waxaa jira wax curfi iyo caado ah oo u baahan in la tixgeliyo.
Maahmaah Ingiriis ah baa oranaysa “teach one’s grandmother to suck eggs” waxaa la isticmaalaa markii qof uu rabo inuu wax usheego dad arrintaas si fiican u yaqaan oo ay dhici karto inay isaga ka badiyaan. Xagar Yare wuxuu rabaa inuu C/Risaaq Xaaji Xuseen, Maxamed Abshir Haamaan iyo dad la mid ah uga sheekeeyo taariikhda C/hi. Dhib ma leh hadduu Xagar Yare rabo inuu isticmaalo Xaddiiskii ahaa “sadaqaka wahuwa kadduubun” oo uu Nabiga (SCW) Abuu Hurayra (RC) ku lahaa shaydaanku markaan run buu kuu sheegay laakiin waa beenaale xeel dheer. Marka hadduu Xagar ka wado in kornaylku mar ama labo waxqabtay sidii dagaalkii Xabashida laakiin dhibtiisa, khiyaamadiisa, dabo-dhilifnimadiisa, diin-nacaybkiisu ay aad uga badantahay arrintaas wuu ka hadli karaa. Anigu waxaan aaminsanahay waxa Xagar Yare lasoo xiimayo inay tahay tii odaygu lahaa war wiilkaas naga qabta. Waxaan filayaa inuu Xagar halkaas la soo istaagi doono in C/hi halyeey yahay oo uu u qalmo in madaxweyne loo doorto.
Akhristayaal Xagar Yare wuxuu noo sheegay inuu wariye ahaa. Hadda wuxuu ka hadlayaa maahan ra’yi. Qofku markuu ra’yi ka hadlayo khasab kuma ahan inuu arrinta siday tahay u cabbiro. Waxaan ka wadaa uma baahna inuu dhacdooyinka siiyo taariikh ama meel. Waxaa ku filan inuu xusso sawirka guud. Xagar Yare wuxuu soo wadaa waxa Ingiriiska lagu yiraahdo “biography” oo Soomaali ahaan ah taariikh nololeedka qofka inkastood mooddo in Soomaalidu ay taariikh nololeed isticmaalaan markuu qofka dhinto. Haddii sheekadu saan ku socoto waxaa lagaa rabaa inaad soo bandhigto taariikhda iyo shakhsiyaadka sheekadu ku socoto.
Waagii Kulmis la joogay ayaa la sheegaa in dadka qaarkiis ay kaarayaasha (tanks) iyo baabuurta gaashaamaan isku dhajin jireen oo ay dhihi jireen waa tankigayagii ama beebeegayagii! Micnaha annagaa qaybtan ama ciidankan u badan. Soomaaliya lafteeda waa lagu xaman jiray. Xagar Yare waxaad mooddaa in caqligaas laftiisii uu isticmaalayo markuu ka sheekaynayey cinqilaabkii. Wuxuu xussay in Cirro uu la xiriiray C/hi oo uu yiri cinqilaabku wuxuu noqon doonaan mid aan dhiig ku daadan ee isa soo diyaari si aad Maxamed Siyaad u bedesho. Xagar yare labo weerood oo kala duwan buu kakala dhigay. Maxaa arrintaas ka jira?
Horta in Cirro ka dhalinyaraa C/hi shakki ma leh. Sidoo kale C/hi waa uga horeeyey ciidamada. Inkastoo labo gaashaanle sare ahaayeen yaa markaas jago ahaan sarreeyey? Kollay dadkii Cirro yaqaanay waxay sheegeen inuu ahaa nin aad u maskaxbadan. Waqtigaas Cirro wuxuu kusoo dhowaaday hogaanka sare ee ciidamada qalabka sida. Madaxweynuhu waa yaqaan ninkii uu naftiisa uga baqay. Waxaa la sheegaa inuu la yaabay sumcada Cirro ku yeeshay ciidanka dhexdiisa iyo booskuu gaaray iyadoo ay joogaan boqollaal sarkaal oo ka sarreeya kana waaweyn. Waxaa la sheegaa inuu u diyaarshay inuu noqdo safiir si uu uga dheereeyo ciidamada. Maxamed Siyaad nin caqli badan buu u ahaa wuxuu gartay in Cirro ahaa mar soo bax.
Cirro hadduu rabo inuu cid hoos joogo Maxamed Siyaad buu hoos joogi lahaa. Cinqilaabka markuu samaynayey uma sheegin C/hi mana oran kaalay oo waraaqahaaga soo qaado si aa waddanka u xukuntid. Sidee qof warriye soo ahaa warar aan sal iyo raad toona lahayn u sheegi karaa. Xagar hadduusan warkayga rumaysan ha waydiiyo Moorgan oo markaas cinqilaabka fashiliyey. Maxaan Soomaalida kale u cayrsanaynaa haddaan dhib kasta oo Soomaaliya inagu bilownay. Boqortooyadii Hobyo maxay noo keentay? Yaa C/Rashiid dilay? Yaa cinqilaabka Xamar ka riday? Yaa cinqilaabka fashaliyey? Moorgan. Yaa bilaabay jabhadii ugu horaysay ee Amxaaro hoosta ka gasha? Yaa Soomaaliya in aragagixiso joogto sheegay? C/hi. Yaa hadda leh ciidamo shisheeye waddanka hala keeno oo waxaan siinaynaa magaalo ay kusoo degaan oo ah Gaalkacyo? C/hi iyo cawaantiisa.
Waxaad ka garanaysaa inuusan C/hi cinqilaabka la socon sida ka muuqata sheekada Xagar in taar loo diray. Xagar wuxuu ku sheegay in taarku u qornaa C/hi naagtaadi waa dhicisay! Waa waxaan u lahaa taangigayaga, shilkahayaga. Xagar wuxuu ka dhigayaa in Cirro C/hi u shaqaynayey. Waxaa dhici karta in ninkii taarka diray uu joogo. Anigu waxaan u maqlay in uu taarku ahaa C/hi hashiinii waa dhashay waana dhicisay. Isagoo ka waday cinqilaabkii Cirro markii hore waa guulaystay markii dambana Moorgan baa fashiliyey. Xagar wuxuu arrintii ka dhigay wax C/hi iskalahaa oo wuxuu ku matalay xilihiisii. Bilo ka hor taageerayaasha C/hi waxay aaminsanaayeen in Maraykan Soomaaliya C/hi udhiibi doono. Waxaad isleedahay warka yaa siiya.
Dad baa C/hi u haysta inuu yahay geesi. Maxay ku dhacday isagoo intaas oo ciidan ah haysa oo ay saraakiisha u badanyihiin dad dhalasho ay isku dhowyihiin inuu Kenya u cararo oo uu Moorgan oo xoogaa ciidan ah Xamar ku haysta uga baqo. Waxaa ku dhacay sas iyo ka fajiciso. Waa markaas marka la ogaado waxa qofku yahay. Cirro marna kama filan inuu Moorgan dhabar jabinayo xisaabtiisiina si fiican bay ugu fushay markii hore.
Akhristayaal Xagar wuxuu nagu khasbay inaan waxyar ka xusno Cirro.Inkastoo Cirro kursi doon ahaa haddana muu rabin inuu dhiig daadsho waxaa qorshaha ugu jirtay hadday u toosto inuu sidii Maxamed Siyaad ku qabsado cinqilaab aan dhiig ku daadan laakiin taasi ma dhicin oo dad door ah baa ku dhintay. Cirro wuxuu qab-qabtay saraakiishii Maxamed Siyaad kuwoodii ugu sarreeyey qaar ka mid ah oo ku jiro Cumar Xaaji Masale oo muddo yar ka dib noqday wasiirka Gaashaan-dhigga iyo kuwo badan laakiin guri buu ku xiray mana dilin halka C/hi uu C/Raxmaan Caydiid iyo Iikar ku dilay isagoo Adisababa jooga oo xitaa aan tuulo haysan. Cirro waxaa cinqilaabka kula jiray saraakiil da’yar oo aysan isku qabiil ahayn. Run ahaantii Ilaah baan Cirro la doonin kursigaas. Marka C/hi waxaa ku fiicnayd inuu ku cibro-qaato in kurisga Ilaah bixiyo oo aan wax aan laguu qorin uusan qofku helin. Sidoo kale waxaa la sheegaa in Cirro uu maxkamada ka qirtay inuu isaga kaligiis dambiga leeyahay ee saraakiisha kale uu amar siiyey aysana dambiga wax ku lahayn halka C/hi reer Gaalkacyo iyo dukaamadooda ku sheegay dad argagixiso ah.
Marka Xagaroow waxay ku fiicnayd in warkaagu kugu jiro oo aadan banaanka isa soo dhigin. Miyaadan u jeedin qof kasta oo Soomaaliya, Waqooyi iyo Koonfurba in C/hi iyo khiyaamadiisa la hadal hayo. Haddaad wariye tahay miyaadan xassuusan cajaladii ay Gaalkacyo ka duubeen? Marka waan ku sugaynaaye ee banaanka isa soo dhig. Soomaalidu waxay tiraahdaa Qur’aan alif ka qaloocday Al-Baqra kuma tooso. Marka qaybtii koowaadba haddaad been iyo dacaayad C/hi ku bilowday yaa kaa akhrisanaya.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 3, 2003